Inozivikanwa neayo aphrodisiac zvinhu, ginger inovandudza kugaya - AFRIKHEPRI
Psycho-kurapwa uye mitsetse yetariro
Liye ginger anozivikanwa zvakanyanya nekuda kwayo aphrodisiac mhedzisiro uye kugona kwayo kukurudzira bonde. Asi hunhu uhwu huri kure nekuve iye wega. Chokwadi ginger ine tambo inopfuura imwechete kuuta hwayo. Kuvandudza kugaya, mafuta anopisa zvinhu. Imwe yemhando yepamusoro-soro ye ginger ndeye izvo zvine chekuita nekugadziriswa kwekugaya.
Zvechokwadi, maererano nezvimwe zvidzidzo, mudzi wacho une nzvimbo inobatsira kukurumidza kushandiswa kwemetabolism. Uyezve, simiti inokonzera manzwiro ekugutsikana mumunhu anoipedza nguva dzose. Iyo inewo kupisa-mafuta, yakakurudzirwa kune imwe nzvimbo yehutsanana hwekudya.
Tsvakurudzo dzezvesayenzi dzakatoratidza kuti ginger inobatsira kuchengetedza maruva emimba mumamiriro ezvinhu akanaka, kugadzira mafuta uye kugadzirisa kana kubvisa chirwere chekudya. Muna 1999, World Health Organisation yakaona kubatsira kwe ginger rhizome kurwisana nekushushikana uye kurutsa kwekuzvimba.
Ichokwadi, iyo gingerols uye shogaols iri mumiti yacho inotora basa rinokosha mune antiemetic effect, kunyanya kuburikidza nekuita kuderedzwa kwekufamba kwemudumbu. Saka midzi inogona kubudirira kutora mavitamini B6 anowanzopiwa kune vakadzi vane pamuviri. Ginger inobatsira zvikuru kupesana-kupisa simba. Kunyanya kune avo vanoda kuurasikirwa, vasingashandisi kudya kwechirasika uye vasina madhara. Inonyanya kukurudzirwa kuti kuderedze dumbu, iro rinowanzobatwa nokuputika kana kushaya kudya.
Inobatsirawo kuderedza fivhiri, kurwisa kurwadziwa uye ine antibacterial uye antiviraire yemiti. Izvo uye pamusoro pezvose zvinokurudzira uye zvinokurudzira muviri. Uyezve, unhu hwahwo hunonzi aphrodisiac hunobva pakukwanisa kutaura muviri wose.
Kushandisa ginger kunodzoka shure kwemashure e5000. Ndiyo imwe yemiti yakashandiswa zvikuru muIndia Ayurvedic mishonga. Uyewo inoshandiswa mukurapa kwemishonga, ginger rinokurudzirwa kusagadzikana kwekudya, kusava nesimba, simba kana kurwisa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Nhasi, simiti ndiyo nyaya yezvidzidzo zvikuru kunyanya kwayo inopesana nekenza maitiro. Ginger, inobva mumaminerari uye mavitamini
Ginger yakafuma mumaminerari. Iine manganese, phosphorus uye magnesium. Asiwo calcium, sodium uye iron. Ichowo chitubu chemavithamini, sezvo ine mavitamini B1, B2 uye kunyanya vitamini B3. Ginger idzva, panguva iyo, rine vitamin C, asi kana yaoma, iyi vitamini inonyangarika.
Pakupedzisira, rhizome ye ginger (pasi pevhu re stem) yakazara mune starch. Inayo inewo mafuta ayo anokosha, asiwo lipids, mapuroteni nemakhahydrates. Kudya ginger nguva dzose kunobatsira hutano hwako. Uye kunyanya, kana iwe uchibatana nawo nemamwe zvinonhuwira zvakadai se turmeric nesinamoni.
Ungadya sei ginger?
Izvo zvakanaka kutora 2 5 gramu ye ginger rhizome (yakaomeswa, saka) yakagoverwa mu 2 kana 3 nguva pazuva.
Asi iwe unogonawo kuidya semaruva chaiyo, amai tincture, zvinwiwa zvezvinwiwa kana kuti grated.
Ginger Bvisa 600mg - High Concentration Extract 20: 1 - Ginger Root - Inokodzera Vegetarians - 90 Mahwendefa (3 Mwedzi Anopihwa) kubva kuDenga rePasi.
kubvira waMay 27, 2020 3:55
✅PURE & ZVAKANAKA! Yese Ginger Roots, Yakasvibiswa & Yakamurwa. Inwa senge chikamu chezvekudya zvine mwero.
✅ SIMBA! Mahwendefa eGinger ane simba zvakanyanya pamusika.
✅MADE IN EU! Ginger yakagadzirwa muEU kune akanyanya kunaka mhando. Izvo zvinoenderana nekuomarara kwemhando yekudzora uye kuenderera mberi kudzora nema accredited akazvimirira ekuongororwa ma laboratori. Isu tinopa 100% yekudzoserwa mari kudzoserwa kana vatengi vedu vasina kugutsikana, saka zvakakodzera kuedza.
ZVESE ZVESE ZVESE ZVAKAITIKA? Pasi Design Yanga iri kupa yakakwira mhando zvigadzirwa zvigadzirwa kwemakore anopfuura masere. Isu tinowedzera huwandu hwedu svondo rega rega uye tinokupa iwe zvekuwedzera zvekudya pane ZVAKANAKA kukosha kwemari.